Vaovao - Fifaninanana fahaiza-manao fanaraha-maso kalitao 2020 natao soa aman-tsara
Fahaizana asa tanana, kalitao voalohany
—Fifaninanana fahaiza-manao fanaraha-maso ny hatsaran-tarehy2020 Natao soa aman-tsara
Hatramin'ny niorenany, Weyer Electric dia nifikitra hatrany tamin'ny fahitana "mamorona marika tsara sy manangana orinasa efa an-jato taonany", mifikitra amin'ny vokatra avo lenta, mifehy tsara ny kalitao, manohy mampiroborobo ny fanahin'ny asa-tanana, ary mampiroborobo ny kalitaon'ny vokatra hatramin'ny fanavaozana ny taranaka mifandimby, manome ny mpanjifa vokatra tsara sy tolotra tsara kokoa. Mba hanatsarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny kalitaon'ny vokatra ho an'ny mpiasa rehetra, hamafiso ny fahatakarana ny mpiasa, ny fahazarana ary ny fampiharana ny fenitry ny kalitaon'ny vokatra sy ny fenitry ny fizotrany ary hanatsara kokoa ny kalitaon'ny vokatra, ny fifaninanana fahaiza-manao fanaraha-maso ny kalitaon'ny taona 2020 dia nosokafana tamin'ny fomba lehibe.
Ny fifaninanana fahaiza-manao fanaraha-maso ny kalitaon'ny taona 2020 dia notontosaina tamim-pahagagana tao amin'ny Hangtou Factory ny 21-23 Oktobra 2020. Ny tanjon'ity fifaninanana ity dia ny hampirisihana ny hafanam-pon'ny mpanara-maso, hanatsara ny kalitaon'ny mpiasa sy ny fahaiza-manao ary ny fikajiana ny kalitaon'ny mpiasa rehetra . Ny mpiasa manara-penitra dia nandray anjara sy nanisy lanjany ny kalitao, hampiroborobo ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa.
Ity fifaninanana ity dia misy ny fanaraha-maso ny famolavolana ny tsindrona, ny vy, ary ny outsourcing faritra sy ny singa, izay mizara ho vondrona 4. Izy ireo dia olona 5 hanaraha-maso ny famolavolana tsindrona ao amin'ny Vondrona A, 5 ho an'ny fanaraha-maso vy ao amin'ny vondrona B, ary 5 ho an'ny fitaovana miditra, fandefasana ary fanaraha-maso ao amin'ny vondrona C. Misy mpanara-maso fantsom-boaloboka vondrona 5 D, mpanara-maso ny bobongolo, mpanandramana ary mpandrefy. . Ny mpandray anjara dia takiana mba hijerena ireo santionany arakaraka ny sary na fanamarihana fanaraha-maso ao anatin'ny fotoana voatondro hamaritana raha mahafeno fepetra ny vokatra na tsia, ary tanisao ny valin'ny fizahana. Ny olona tsirairay dia mizaha vokatra 15, ary isa mifanaraka amin'ny fahitsiana sy ny fahombiazan'ny fanaraha-maso. Isa 10 no henoina isaky ny fanaraha-maso diso na fizahana tsy hita. Ny valin'ny fanaraha-maso dia tsaraina ary vitan'ny mpitsara sy ny lohan'ny mpitsara. Mandritra izany fotoana izany dia asaina ny departemanta teknika, ny sampandraharaha misahana ny fitantanan-draharaha, ny sendikan'ny mpiasa, ny sampana mpamokatra ary ny talen'ny atrikasa hanara-maso sy hanombatombana eny an-toerana.
Ireo mpifaninana, mifototra amin'ny fitsipiky ny fifaninanana hoe "aza adino izay lesoka, aza ahena ny fenitra manara-penitra", miatrika am-pahatoniana ny fanombanana henjana, mampiseho ny fari-pahaizana matihanina sy ny fifaninanana. Taorian'ny fifaninanana masiaka dia nahazo ny loka voalohany sy ny anaram-boninahitra "Quality Expert" i Zhang Hua tamin'ny isa 128 mahery. Li Weihua sy Tian Yuankui no nahazo ny loka faharoa. Zhang Sen, Jiang Juanjuan ary Wang Mingming no nahazo ny loka fahatelo. Ye Jinshuai sy Sun Yaowei dia nandrombaka ny loka "Newcomer Encouragement Award".
Ny filoha lefitry ny famokarana ny orinasa Liu Honggang, talen'ny fitantanan-draharaha Dong Huifen, talen'ny fitantanam-bola Wang Wenping, talen'ny departemantan'ny drafitra Wang Yirong, mpitantana fitehirizana sy fitaterana Long Zhongming, mpitantana ny famokarana Hou Yajun, mpitantana sampana teknika Xu Chonghua, ary mpitantana ny fitaovana Lu Chun no nanatrika ny kalitao Diniho ny lanonana fankalazana ny fifaninanana fahaiza-manao ary omeo loka ireo mpandresy ary makà sary vondrona.
Tamin'ny alàlan'ity fifaninanana ity dia navitrika tanteraka ny hafanam-pon'ny mpiasa amin'ny fahalalana fahalalana kalitao, ary noforonina ny tontolon'ny fiaraha-mitantana misy kalitaon'ny "soatoavina ny kalitaon'ny rehetra", nametraka fototra mafy orina hanamafisana ny valin'ny kalitaon'ny vokatra sy hanatsarana ny kalitao. Amin'ny ho avy, ny olona WEYER dia hanohy hanao fandrosoana amin'ny alàlan'ny ezaka tsy tapaka hanomezana vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny mpanjifa, hahafahan'ny mpampiasa mahazo antoka!